I-Semalt Expert: Kutheni ukugwema u-Google Analytics Referral Spam
Nik Chaykovskiy, i-8 (Semalt uMphathi oyiNtloko kuMphumeleli wabaThengi, ukhumbuza ukuba idatha iyona nto ibalulekileyo iikhampasi zentengiso ye-intanethi . Uninzi lwabanikazi bewebhu kunye nabaqhubi baxhomekeke kwizakhono zokuphatha idatha. I-Google Analytics ugaxekile kuletha uhambo oluthile kunye nokuhanjiswa kwewebhu, ukwenza ulwazi ngeendlela ezingalunganga - comprar oculos de sol ray ban. Kubalulekile ukuba abantu basuse ugalelo logalelo kwi-metrics yakwaGoogle Analytics. Ngokomzekelo, unokufumana ukutyelela ezininzi kwiwebhu ukusuka kwimimandla efana neDarodar okanye i-Ilovevitality.
Ugaxekile lweGoogle Analytics
Ugaxekile lweGoogle Analytics lubandakanya naziphi na iintyelelo zewebhu eziza kwiwebhusayithi yakho kwezinye iindawo. Kwezinye iimeko, ezinye iisayithi onokuzithengisa nazo zingabangela i-fake traffic. I-spam yokudlulisa ingaba kwezi zimbini zilandelayo:
Ukudluliselwa komoya: Ezinye iindawo kunye newebhsayithi zinokufikelela kwi-Google Analytics UAID. Bhalisa iphepha lokutyelela kwiqela lakho le-GA. Nangona kunjalo, ababonisi njengetyelelo lewebhu kwiwebhsayithi yedeshibhodi. Ziyabonakala njengeendwendwe ezihambela kwi-akhawunti yakho ye-GA.
Iinjongo ze-spam: Kwezinye iimeko, iindwendwe ezingekho ngabantu zingabakraza ii-link kwiwebhusayithi yakho. Enyanisweni, oku akukho ukutyelela kwewebhu ngokusemthethweni.
Izizathu emva kwe-Google Analytics spam
Ukuhlaselwa kwe-Spam kubandakanya iinjongo ezininzi.Njengeendlela ezininzi ze-SEO zobuchwephesha, ugaxekile yindlela ephula imithetho emininzi ukufikelela ekujoliswe kuyo. Ukuvakasha kwewebhu ngenxa yezizathu ezifana:
Ukusebenzisa i-malware. Bangaphinda benze iintlobo zobugebengu ezifana nobusela bekhadi lokuthenga ngetyala okanye baze babambe iziqinisekiso zokungena ngemvume. I-Keyloggers inokwenza lula ukulwa nolwaphulo-mthetho njengokuthathela ulwazi lwezemali.
Iindwendwe zokubhenela. Kwezinye iimeko, ezi hlaselo zijoliswe ekubhekiseleleni kubantu kwezinye iiwebhusayithi. Bayiyo-e-black hat ye-SEO arhente ezithembisa ukuba iziphumo ezikhawulezayo zesikhokelo ngexesha elifutshane. Bavame ukusebenzisa ukutyelela kwiisayithi okanye kwiphepha, kodwa musa ukuguqula ukuthengisa.
Ukuthengisa imveliso. Uninzi lwee-Google Analytics uhambo logaxekile yiinkampani ezifuna ukuthengisa into ethile. Ngokufikelela kwizigidi zabantu abathengi kwihlabathi jikelele, banethemba lokuba umntu omnye uya kuguqula ukuthengisa. Ekugqibeleni, ziphela ziphazamise ulwazi lwakho lwezithuthi xa zizama ukuthenga.
Kutheni kunye nendlela yokulungisa i-Google Analytics ugaxekile
Ukutyelela i-Spam yewebhu yenza ukuba iiwebhsayithi zithinteke ekufumaneni iimetriki zazo ezingagqibekanga kwiqhinga lokuthengisa i-intanethi. Kwiimeko ezininzi, bavame ukuzisa ulwazi olungabandakanyekanga nendlela ibhizinisi lakho lisebenza ngayo kwi-intanethi. Kubantu abaninzi, ukusebenzisa iifayile zogaxekile kwiTebhu ye-Google Analytics ithebhu ingazisa isisombululo kuhlaselo oluninzi logaxekile. Ngokomzekelo, i-spam domain njengeDarodar ingafumana impazamo engu-403 ithetha ukuba abanalo igunya lokujonga iwebhusayithi yakho. Esi sihlungi sakwagaxekile sinokukwenza ukuba indawo yakho ikhululeke kwi-spam. Kwezinye iimeko, abantu bayeka iikhowudi okanye iifayile .htaccess kwiingcambu ze-domain. Ezi fayile zingavimbela abaqhawuli bewebhu njengalezi zigaba ze-spam.